कोरोना खोपले प्रजनन्‌ क्षमतामा असर पार्ने कुरामा सत्यता छ ? - OK Khabar
कोरोना खोपले प्रजनन्‌ क्षमतामा असर पार्ने कुरामा सत्यता छ ?
ओके खबर १ फाल्गुन २०७७, शनिबार २१:०४ मा प्रकाशित ( ३ हफ्ता अघि) ३८१ पाठक संख्या
काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपले नपुंसकता गराउसक्ने, प्रजनन् क्षमतामा असर गर्नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्‍जालमा विभिन्‍न दाबी गरिएका छन् । तर, विज्ञहरुले भने कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपले प्रजनन् क्षमतामा कुनै असर गर्ने कुरा पत्ता नलागेको बताएका छन् ।सामाजिक सञ्‍जालमा फाइजर खोपले महिलाको प्रजनन् क्षमता असर गर्ने र महिलाको र पाठेघरमा आक्रमण गर्ने दाबी गरिएको छ । तर, सामाजिक सञ्‍जालहरुमा दाबी गरिएजस्तको कुनै असर गरेको नभेटिएको बताइएको छ ।
किङ्‌स कलेज लन्डनका प्रोफेसर तथा रोयल कलेज अफ अब्सटेट्रेसियन्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्टका प्रवक्ता प्रोफेसर लुसी चापेलले भनिन्, “हामीले गरेको अध्ययन अनुसार प्रजनन् क्षमतामा कुनै असर गरेको पाइएको छैन ।”
खोपले शरीरमा कोरोना भाइरसको हानीरहित सानो विशिष्ट ‘स्पाइक’ अंशसहितको एउटा सन्देश शरीरमा पठाउँछ । यसलाई मानिसको शरीरमा एन्टिबडी र सेता रक्तकोषहरु उत्पादन गरेर प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सक्रिय बनाउछ ।
यसले तपाईंको शरीरमा भाइरस रहन सक्दैन र तपाईंको आफ्नै आनुवंशिकतामा कुनै असर गर्दैन । शरीरमा पठाइएका सानो स्पाइकहरुको अवधि निकै कम हुन्छ र प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हुनेबित्तिकै कोरोना स्पाइकहरु मर्न थाल्छन् ।
त्यसकारण कोरोना भाइरसको खोपलाई निश्‍चित तापक्रममा राख्‍नुपर्ने भनिएको हो । त्यसमा पनि विशेष गरी फाइजर खोपलाई निकै सावधानीपूर्वक भण्डारण गर्नुपर्दछ ।
लीड्स विश्वविद्यालयको भाइरोलोजिस्ट प्रोफेसर निकोला स्टोनहाउसले यस्तो आनुवांशिकतामा असर गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नभएको बताएकी छन् । – बीबीसी
काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपले नपुंसकता गराउसक्ने, प्रजनन् क्षमतामा असर गर्नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्‍जालमा विभिन्‍न दाबी गरिएका छन् । तर, विज्ञहरुले भने कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपले प्रजनन् क्षमतामा कुनै असर गर्ने कुरा पत्ता नलागेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्‍जालमा फाइजर खोपले महिलाको प्रजनन् क्षमता असर गर्ने र महिलाको र पाठेघरमा आक्रमण गर्ने दाबी गरिएको छ । तर, सामाजिक सञ्‍जालहरुमा दाबी गरिएजस्तको कुनै असर गरेको नभेटिएको बताइएको छ ।
३ लाख ४८ हजार डोज कोरोना भ्याक्सिन आज नेपाल ल्याइदै
प्रदेश १ र बाग्मतीका यी क्षेत्रमा आज विद्युत अवरुद्ध हुने
आजबाट प्रधानमन्त्रीसहित ६५ बर्ष माथिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाईंदै
नारायणगढ–मुग्लिन सडक आजदेखि एक हप्ता दिउँसो बन्द हुने, यस्तो छ कारण
ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको सहज जित
संसदको सातौं अधिवेशन आज, यस्तो छ कार्यसूची
नेपाल–पाकिस्तान फ्रेन्डसिप क्रिकेट : बालुवाटार र ग्रेट हिमालय विजयी
मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा, प्रधानमन्त्रीले भने– लड्डु यस्तो बेलामा खानुपर्छ
वर्षा र हिमपातको सम्भावना, यस्तो छ आगामी तीनदिनको मौसम पूर्वानुमान
अस्ट्रेलिया पठाउन लागिएको खोप इटलीले किन रोक्यो ?
२ वर्षपछि विप्लव आज सार्वजनिक हुँदै, प्रधानमन्त्री ओलीसँगै भाषण गर्ने
अबको भूराजनीतिक वर्चस्व कम्प्युटर चिप्समा निर्भर